UKUMAHA UKUNTA: FAA'IDOOYINKA IYO DHIBAATADA, WAXA KA DUWAN DIGAAG, SIDA LOO ISTICMAALO - BEERAHA DIGAAGA
Ma suurta gal ah in la cuno ukun turki ah
Ukumaha Turkiga waa wax aad u yar oo aan caadi ahayn miisaankeenna, sababtoo ah inta badan kalluunka waxaa lagu koray hilib. Haa, iyo dukaamada cuntada caadiga ah ma heli karaan. Si kastaba ha noqotee, ukumaha shimbiraha ma aha kuwo ka liita qiimaha nafaqada iyo dhadhanka digaaga, marka laga reebo, waxay yihiin cunto iyo faa'iido leh. Marka aad cunto karisid, waxaa loo isticmaali karaa si kasta, sida ukumaha kale ee shimbiraha. Haddii aad doonayso inaad ku darto alaabtan ku jirta cuntadaada, u degdeg inaad barato waxyaabaha ku habboon, sifooyinka isticmaalka, xulashada iyo keydinta buuggan.
Maxay ukumaha ukumaha u egtahay
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee badeecada:
Miisaanka: 70-80 g (go'aamiyey da'da shimbir).
Cabbirka: dhererkoodu waa 5-7 cm, ballaciisu waa ilaa 4-5 cm.
Shell: waxay leedahay cufan, laakiin qaabdhismeed iyo jajabyo leh.
Midabka: caddaan ama goosi, marmarka qaarkood waxay noqon kartaa mid buluug ah, iskudubarid leh hoos ah.
Sababtoo ah xaqiiqda ah in wax soo saarka ee turkiga aad u hooseeya (xilli ah 10-25 gogo '), iyo wax soo saarka ukunku aad ayuu u soo daahay, ilaalinta digaaga ee helitaanka alaabta ukunta ma aha mid dhaqaale ahaan faa'iido leh mana ka soo jiidasho xiisaha ganacsatada. Sidaa darteed, dukaamada iyo dukaamada ma iibsan karaan badeecadan. Dadka intooda ugu badan, ukumaha turkika waa wax aad u wanaagsan, oo aad u adag oo la gaarsiiyo iyo alaab qiimo leh. Waxaad ka heli kartaa oo kaliya beeraha takhasuska leh, dukaamada beeraha, ama si toos ah uga yimaada dadka ku hawlan shimbiraha.
Ma taqaanaa? "Digaag Isbaanish" - sida naaneeysiga turkey ee qaada Turkiga ayaa helay Yurub. America waa meesha ay ku dhashaan shimbiraha, iyo mahadnaqa helitaanka Columbus ee shimbiraha u yimid Europe iyo ka heshay caan ku ah caalamka. Waxay ahayd Spain in beeraha ugu horreeya ee dhirta la dhisay, taas oo ah sababta ay shimbiruhu u qaataan naanaysta cajiib ah.
Qodobbada waxtarka leh ee alaabta
Badeecada waxaa ku jira waxyaabo badan oo vitamin-macdan ah, asiidh dufan leh, borotiinno iyo dufan, taasoo ka dhigaysa waxtar u leh jirka. Guryaha muhiimka ah ee badeecada:
Cholesterol ee ukunta turkey waa "wanaagsan" (lipoproteins sare), sidaa darteed badeecadu waxay leedahay saameyn ku leh xaaladda xaaladda wadnaha iyo xididdada dhiigga.
Sababtoo ah hypoallergicity, alaabta turkey ayaa loo ogolyahay xitaa carruurta da'dooda ka yar hal sano iyo dadka xasaasiyad leh xasaasiyad.
Isticmaalka joogtada ah wuxuu saameyn ku yeeshaa hababka dheef-shiid kiimikaadka, soosaarka turkey wuxuu faa'iido u leeyahay dadka ay la halgamayaan cayil.
Caadi ahaanshaha mareenka caloosha iyo mindhicirta (gaar ahaan waxtar u leh dadka qaba xanuunka sare ee caloosha iyo gastritis).
Xoojinta nidaamka difaaca jirka.
Caadi ahaanshaha nidaamka dareenka, joojinta hurdo la'aan iyo daal.
Hagaajinta xaaladda maqaarka iyo timaha inta lagu jiro isticmaalka dibadda.
Iyada oo ay sabab u tahay dheefshiidka sare iyo hypoallergenicity, badeecada waxaa lagu talinayaa in la cuno cuntada dadka ay daciiftay jirro muddo dheer, ama waayeel.
Baro wax badan oo ku saabsan ukumaha digaaga: waa maxay faa'iidada, waa suurtogal in la cuno cayriin; calaamadaynta cusub; Waa maxay sababta ukumo leh laba xabbo, sonkorta cagaaran, dhiig; sida loo xareeyo ukunta digaaga; waxa faa'iido leh ee qolofta ukunta iyo sida loo isticmaalo baqshiinka beerta iyo beerta khudradda.
Turkiga iyo ukumaha digaaga: waa maxay farqiga, kuwaas oo caafimaad qaba
Guud ahaan, ukumaha turkika ah iyo ukunta digaaga ayaa aad ugu eg dhadhanka iyo guryaha. Ujeeddo ahaan, kuwa ugu horeeya waxay ku badan yihiin cabbirka iyo miisaanka, kaas oo lagu sharraxayo xajmiga shimbirta laftiisa. Waxay sidoo kale ku kala duwan yihiin midabka iyo xoogga qolofka. Ukumaha Turkiga waxaa loo tixgeliyaa in ay tahay badeecad cunto badan sababtoo ah waxyaabaha wanaagsan ee kolesteroolka.
Waxaad u isticmaali kartaa badeecada si la mid ah sida ukumaha kale ee bacadka ah. Waxyaabaha Turkigu waa la kariyaa ukunta qoyan iyo qaxwaha, ku dar jamacyada iyo saladhyada, cun cun, la kariyey, la dubay oo la shiilay. Iyadoo la tixgelinayo cabbirka weyn, ukumo loo isticmaalo karinta. macmacaanka, suugada.
Sidoo kale akhri waxyaabaha ku saabsan alaabta iyo isticmaalka cunto-kariska ukunta: ducks, goose, caesarea, ostrich.
Qaar badani waxay u yimaadaan inay dhadhamiyaan ukumaha la kariyey iyo cusbada. Waxyaabaha Turkigu ma laha dhadhan gaar ah ama ur aan caadi ahayn ee ukumaha shimbirta. Inta lagu jiro daweynta kuleylka, borotiinku waa mid cad iyo midab ah, iyo jiirka waa ceeryaan huruud ah.
Maxaa la kariyaa dalalka kala duwan ee adduunka?
In jikada ee quruumaha kala duwan ee adduunka, ukunta turkey waa mid caan ah oo caan ah.
Tusaale ahaan Spanish jacaylka jacaylka ah ee loo rogo borotiinka xumbada, kaas oo la qalajiyey miraha iyo dhirta.
Bortuqiis diyaariso baasto leh ukun la cuno digaaga.
In Norwey Ukunka waxaa si caadi ah loo isticmaalaa in lagu sameeyo boodhadhka jilicsan iyo hindisada.
In England Ukunta ukunta ee Fiktooriya ayaa loo isticmaalay inay sameeyaan suugo bechamel ah. Sidoo kale muddo dheer waxaa la rumaysan yahay in alaabta turkeyku ay ugu haboon tahay saldhigga suugada.
Ma suurtogal in la cuno cayriin
Waxyaabaha aan la diyaarinayn waxay leedahay saameyn weyn oo ku jirta xajiinta caloosha, iyo alkali waxay hoos u dhigtaa heerka acidity. Cunista qastiga qoyan waxay keeni kartaa nasin waxayna hoos u dhigi kartaa xanuunka muddada gumaarka.
Si kastaba ha ahaatee, khabiirada kuma talinayaan in ay isticmaalaan sheygan saameeya sababtoo ah dheef-shiid kiimikaadka oo liita iyo awoodda ay u leedahay "xirto caloosha", taas oo horseedi karta qashinka. Carruurtu waa ka mamnuuc inay cunaan ukunta cayriin!
Waa muhiim! Markii la cunay cayriin, waxaa jira khatar aad u sareysa oo leh cudurka salmonellosis. Cawaaqibka infekshanku gaar ahaan khatar ayay u yihiin carruurta, waayeelka iyo dadka jirkoodu daciif yahay sababtoo ah cudurrada.
Muddada karinta waxay ku xiran tahay xajmiga badeecada iyo heerarka la rabo ee diyaarinta. Wixii ukumo dhexdhexaad ah, 3-4 daqiiqadood ayaa ku filan si aad u hesho jilicsan, shucaac leh iyo 8 daqiiqo si aad u karisato adag-karkarsan. Shayada waaweyn waxay u baahan yihiin cunto karinta 5-6 daqiiqadood iyo 12 daqiiqadood, siday isugu xigaan. Tiknoolajiyada wax lagu kariyo ee haboon
Kahor daaweynta kulaylka, badeecada waa in si fiican loo biyo raaciyaa biyo qashin.
Marka xigta waxaad u baahan tahay inaad ukumaha ku shubto digsi, ku shub biyo qabow, ku rid kuleyl dhexdhexaad ah.
Biyaha cusbada si looga hortago dildilaaca qolofka (1 tsp) 1 litir).
Karso 5-12 daqiiqadood iyada oo ku xidhan heerarka la rabo ee karinta.
Marka la dhammeeyo, ku rid biyo qabow 3-5 daqiiqo si aad ugu nadiifiso qolofka.
Waxaan kugula talinaynaa inaad akhrido qiyaasta, qiimaha iyo isticmaalka hilibka iyo beerka turkey.
Sida loo doorto marka la iibsanayo
Maadaama ukumaha turkeyku qaali yahay oo dhif yahay, waa inaad si taxadar leh u dooratid alaab si aan lacag loogu qarin kuwa ku dhumay.
Xayawaanka waa in ay nadiif ahaato, iyada oo aan la raadineynin qashin, baalasha iyo sunta kale.
On qolof waa in aysan aheyn wax farsamo iyo cillado.
Ku dhaji badeecadda - waa inuusan jirin urin shisheeye ama mid aan fiicneyn.
Iyada oo gariir xoogan, sokorta waa inaysan soo saarin.
Ka hor inta aanad karin, hubi barafka. Si arrintan loo sameeyo, qallajin badeecada biyaha: shahwada cusub, iyo da'da hore waxay ku dabooli doontaa dusha sare ama dhexda markabka.
Waa muhiim! Xasuuso in dhamaadka xilliga dayrta iyo bilowga ama dhexda jiilaalka ay ku dhowdahay in ay soo iibsato alaab tayo leh, tufaaxa cusub, sababtoo ah wax soo saarka xilliyeed ee shimbirta.
Iyada oo ay sabab u tahay dhismaha dabacsan oo jilicsan ee qolofta, alaabta turkey ayaa leh hal muuqaal - si dhakhso ah u nuugaan urta alaabta iyo walxaha kale. Sidaa darteed, inta lagu jiro kaydinta, la xiriir alaabooyin kale oo leh kookal cadaan ah (kalluunka, liinta, dhirta iyo dhirta, sigaar cabbista, basasha, iwm) waa inaan loo oggolaan. Marka la eego qallajinta, alaabtu waxay u qaybsan yihiin laba kooxood oo waaweyn:
nadaafada jirka, alaabooyinkaas waxaa loogu yeeraa nolol shelf ilaa 10 maalmood;
qolalka qadada. Waxaa lagu kaydin karaa wax ka badan 25-30 maalmood.
Waxyaabaha la dhaqay waxay ku haboon yihiin cunto ilaa 12 maalmood. Xaaladaha oo dhan, heerkulka kaydinta waa inuusan ka badneyn +7 ° C, qoyaanku waa inuu ku jiraa inta u dhaxaysa 60-80%. Waxaad ku kaydin kartaa alaabta qaboojiyaha ama miiska. Haddii aad isticmaasho ka dib, wali waxaad haysataa jaakad caan ah, waa lagu dari karaa weel biyo ah oo lagu kaydiyaa qaboojiyaha ilaa 2-3 maalmood.
Ogow inta uu le'eg yahay ukumaha iyo sida loo hubiyo qoyaanka ukumaha guriga (biyaha).
Si aad ah u kordhiya nolosha shelf ee alaabooyinka waxay noqon kartaa ka dib marka la soo saaro qolofka leh paraffin, dufanka khudradda ah ama digaaga. Walxahan waxay xiraan daloolada waxayna ka hortagayaan urka ka soo baxa. Foomkan, alaabtu waxay u adeegsan karaan 90 maalmood. Si kastaba ha noqotee, daaweynta waa in la fuliyaa ugu dambeyn 1-3 maalmood laga bilaabo xilliga burburinta. Waxaad sidoo kale ilaalin kartaa badeecooyinka salineeska. Tusaale ahaan, si loo kaydiyo daaqad daraasad waxay u baahan doontaa 1 litir oo biyo ah, 1 tsp. cusbo iyo 50 g oo dhakhso ah. Qalabkan, alaabooyinka waxaa lagu kaydin karaa ilaa 4-5 bilood dheriga dhalada ama dhalada. Si kastaba ha noqotee, waa in maskaxda lagu hayaa in qolofka habkan uu noqdo mid khafiif ah, iyo dhadhanku wuxuu noqdaa mid gaar ah.
Ma taqaanaa? Ukunta qashinka waxaa lagu daboolaa tiro badan oo indhaha ah - in ka badan 7,500. Waxay lagama maarmaan u yihiin naqaska neefta iyo gaasta ee jiirka mustaqbalka.
Yaa iyo sidee ayuu wax u yeeli karaa
Laguma talinayo in la isticmaalo badeecada cudurada sida:
carqalad daran ee beerka, kelyaha, wadnaha;
Ku xadgudubka dheefshiidka protein;
Sidoo kale waa mid u qalantaa in la xusuusto in, inkastoo hantida cuntooyinka iyo faa'iidooyinka leh, alaabtu ma aha in si aad ah loogu qurxiyo miisaanka xad-dhaafka ah. Sababtoo ah qiimaha nafaqada sare iyo qiimaha kalooriga ee hal cutub oo maalintii, waxay noqon doontaa mid ku filan si loo helo faa'iidada ugu badan ee alaabta. Sida aan hore u soo sheegnay, ka hor intaadan cunin ukumo waa in la mayraa oo si khafiif ah loogu baaraandegaa si loo nuugo oo loo yareeyo halista salmonellosis. Ameerika, ukumaha turkiiga ah ayaa la cunay qabiillooyin badan oo Indian ah. Dunida casriga ah, badeecadahan waxaa lagu cadaadiyay ukumo digaag ah, oo si fudud loo heli karo, uguna jaban. Si kastaba ha ahaatee, waa alaabta turkey ee ka faa'iideysanaya jirkeena. Haddii aad haysato fursad aad isku daydo raaxada, ha ka waabanin daqiiqad!